Sida loo abaabulo Your Lugood Music Si fudud
> Resource > Lugood > Sida loo abaabulo Lugood Maktabada tayo leh
Haddii aad isticmaalayso iPhone ama iPod hadda, waxaa jira fursad aad u maamuli music adiga oo isticmaalaya Lugood - sababta oo ah in hab sida wax soo saarka Apple ku xiran yihiin. Indeed, Lugood si wanaagsan buu falaa shaqada, si kastaba ha ahaatee, ma ahan mar walba kaamil ah marka ay ku yaac ah oo buuxda gabayo mislabeled ama labalaabka. Warka fiicani waxa weeye in aad ka heli kartaa qalab weyn oo halkaan inuu ka caawiyo abaabulka maktabadda Lugood aad. The Wondershare TidyMyMusic u Mac si toos ah u baadhaa dhammaan macluumaadka aad music Lugood iyo waxa kale oo uu ogaado songs labalaabka si aad u soo saarto. Bal aan fiirino dhow sida loo isticmaalo si ay u abaabulaan Lugood aad hoos ku qoran.
Orod barnaamijkan dib markii la rakibey. Markaas waxaa si toos ah iskaan kartaa maktabadda Lugood aad ku darto oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood. Waa maxay dheeraad ah, marka ku xigta aad furto barnaamijka, waxan u samayn doonaa iskaanka mar kale.
2 dayactir oo dhan songs mislabeled
Si aad u hesho macluumaad aad music dhan Lugood, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso sanduuqa ku tilmaamay "Raadi Allaha Songs" in madax iyo riix batoonka Scan. Markaas barnaamijkan bilaabi doonaa howsha baadhi ah. Haddii aad qabto ururinta music weyn, waxaa laga yaabaa in xoogaa waqti ah kacayso inta aad daa karaa inuu sameeyo waxyaabo kale.
3 codso warbixin ku ogaaday in music Lugood
Ka dib markii ay dhamaan macluumaadka laga helo, ka dooro mid song si aad u hubiso in ay macluumaad cusub ee column ku yaal dhinaca midig ee suuqa. Markaas riix batoonka Codso in Cudarada macluumaadka heesta. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso aad u codsato macluumaadka ku jira Dufcaddii.
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan siiyaa fursad labaad ee xaalkaa macluumaadka oo dhan keligaa aad. Guji Edit icon ee khaanadda saxda ah oo dhan, iyo beeraha macluumaad noqon doonaa editable. Markaas waxaad soo jiidi kartaa inaad sanam u meel album tahay iyo nooca ay hadalkiisa kasta oo ah berrimmadii kale.
4 saar tus
Tallaabada labaad, waxaa jira checkbox kale tilmaamay "Raadi labalaabka Songs" in madax. Sax checkbox iyo riix batoonka Scan. Markaas heesaha oo dhan labalaabka waxaa laga heli karaa. Ka dib markii in, guji Songs labalaabka in bar xaaladda iyo heesaha oo tus ka lagu soo bandhigi doonaa saxaarad faylka. Guji mid ka mid ah hees iyo hubi oo dhan tus ay khaanadda saxda ah. Markaasaan idin tagsiin karo gabayadii aan la rabin.
Fudud, miyaanay ahayn? Hadda waxaad ku raaxaysan kartaa Lugood maktabadda macluumaad dhamaystiran oo tus ka jirin. Music-aragnimo wanaagsan yahay, sida, baad u socotaa si ay u jecel yihiin.